Sei vatorwa vasingashandisi danda kana vachiredza? Ivo vanofarira kushandisa hoels reels!
MuChina, kuchine vabati vehove vazhinji vachiri kushandisa nzira yechinyakare yekubata hove, asi hapana kana tsvimbo yekubata kunze kwenyika, uye vanosarudza kushandisa hove dzekuredza. Ndechipi chikonzero? Nei paine mutsauko wakadai? Tevere, tevera KK kuongorora! 1, Kubata hove nzvimbo Iyo ...
Ndeupi musiyano uripo pakati pemidziyo yekuredza ine mukombe dhayamita 3000 uye kapu dhayamita 4000?
Pane misiyano mitatu pakati pezvikepe zvekuredza 3000 ne4000. Kureba kwetambo yekuredza kwakasiyana mukapu, kumhanyisa kwekugamuchira kwakasiyana, uye huremu hwechikepe chekuredza chakasiyana; Paunenge uchishandisa magwa ekuredza hove, iwo modhi zviyero zvezvikepe zvekuredza zvinowanzo nyorwa ne ...
Izvo hazvina kuomera Kukwezva kusarudza chaiyo yekuredza reel munzira kwayo
Kunyangwe zviwanikwa zvemumba zvisina kukodzera seizvo zvekune dzimwe nyika, hazvireve kuti hapana hove yekuenda kuLure. Seimwe yehove inofarira yeLure, qiaozui inozivikanwa kwazvo pakati pevanhu veLure. Zviri kunyanya nekuti muromo waLure unonyanya kufadza, kunyanya kwete ...
YAMASHITA akateedzana zvigadzirwa
—— LIVE SEARCH —- Yakavakirwa-mukati mhete mhete, mutumbi unovhenekera wakaputirwa nemhando yepamusoro yemafuta machira, uye inowirirana neakasarudzika wavelength yechiedza che 490 chinoonekwa kune squi ...
Iyo gamba haribvunze kunobva? Iyi ndiyo nzira inoshoreka kwazvo yekuredza nevabati vehove veTaiwan!
Munguva pfupi yapfuura, nzira yekuredza yakatora iyo Internet nedutu. Iyi nzira yekuredza inoda chete tsvimbo imwe uye tambo imwe. Hapana kukukurwa kunodiwa, ndoda kuzvigadzirisa! Uku hakunakidzi kubata tsvimbo! Vazhinji veTaiwanese vabati vehove "masters" vanogona kuseka nzira iyi yekuredza uye zvakananga ...
MARIA akateedzana zvigadzirwa
—— DUPLEX —— Iyo diki Mino, inofanirwa-kuve yekuredza hove, ndiyo nyeredzi yezvikokovonho zvitatu —— LEGATO F190 —— ...
Nguva yekuredza yechando, bata "hove" ndiyo kiyi!
Kunzwisisa maitiro ehove chikamu chakakosha chekuvandudza mwero wekuredza! Isu tese tinoziva kuti hove dzakaoma kubata munguva yechando, asi iwe unoziva maitiro eakasiyana eanangwa hove muchando? Chete kana isu tinoziva tsika dzechando hove, patinogona kuita shanduko kune chirauro, mutsetse ...
Master Kawakami's squid hove, maitiro ekuita negungwa rine matope?
Shenzhen ichangobva kusangana nedutu mutauriri weYAMARIA VaHideyo Kawakami naVaGoo Ji, mukuru weChina Zvakasvika pano mushure medutu Gadzirira kuyedza kubata squid mumhepo ine simba Mushure mekuferefetwa kwakawanda Yangmei Keng akasarudzwa senzvimbo yekuyedza hove mu gungwa rakasviba uko mhepo ...
Octopus, squid, squid, cuttlefish, ndeupi musiyano pakati pavo?
Imwe, chidzidzo chakasiyana 1. Octopus Bai: Octopodidae. 2. squid: Du mhuri yeCalamari, Mhuri Decarbonidae. 3. squid: squid odha Radix Aconzhi Sidae. 4.Cuttlefish: Tenebrionidae, Raira Decarbida. Maviri, Akasiyana morphological hunhu 1. Octopus: Muviri we octopus mupfupi uye oval ...
Kupenya Zvimiti zveKubata paMutengo weKutengesa
Kupenya Nesu kunopa hukuru hwemhando yepamusoro hove tsvimbo pazasi pemitengo yakawanda yakawanda. Yedu yekuredza kupenya matanda ane zvakatipoteredza zvine hushamwari, kutsemuka & kuvuza kusagadzikana uye hunyoro humbowo. Ko hove dzinobatira matanda dzinoshanda sei? Kubata Kupenya Zvimiti shandisa kemikari kuita kuti ibudise mwenje. Kamwe mukati ...
Beacon vs yakachipa kubva pamutsara unopenya matanda .. nei ndachinjira kune yakachipa mushure mekushandisa zita rekuti brand iwo kwemakore.
Kunyanya kutariswa: Yedu fekitori kurongedza: 2pcs / bhegi, 50bag / yemukati bhokisi, Hwerengedzo ye100pcs Mamwe mabhizinesi papuratifomu kurongedza: 5pcs / bhegi, 10bag / yemukati bhokisi, Hwerengedzo e50pcs Mutengo wefekitori yedu ndiyo yakaderera. Isu hatisi kambani yekutengesa, Isu tinopa iyo purofiti yevanamiririri zvakananga kune vatengi vedu ....
Kubudirira kweindasitiri yekuredza
Sekureva kwenhamba dzisina kukwana dzakaburitswa neChinese Fishing Association muna2015, kune vanhu vanosvika miriyoni zana nemakumi maviri vanobata hove kuChina (huwandu hwevanhu vanoenda kunoraura kanokwana kana pagore) Panguva imwecheteyo, hove haisisiri kodzero dzega. ye ...